"ဟက်ကာ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဟက်ကာ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၁၂:၀၈၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ
၂၇၈ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်
→‎ဟက်ကာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်: Added further explanation for "Crackers" who are not to be mistaken with the people who love reverse engineering.
၀၇:၅၈၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၂:၀၈၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
(→‎ဟက်ကာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်: Added further explanation for "Crackers" who are not to be mistaken with the people who love reverse engineering.)
ယနေ့ခေတ်တွင် ဟက်ကာဟူသော စကားလုံးကို [[ကွန်ပျူတာ]] ရာဇဝတ်မှု ကျုးလွန်သူအဖြစ် ၁၉၈ဝ ခုနှစ်ကတည်းက မီဒီယာများတွင် သုံးနှုန်းခဲ့သည်။ ယင်းတွင် ဟက်ကာဗန်းစကားဖြစ်သော "script kiddies" လည်းပါဝင်သည်။ သူတို့သည် ဝါရင့်ဟက်ကာများ ပြုလုပ်ထားသော
ဟက်ကင်း [[ပရိုဂရမ်]]များကို အသုံးပြုသူများ ဖြစ်သည်။ script kiddies တို့သည် ကွန်ပျူတာ အသိပညာ နည်းပါးလှပြီး ဟက်ကင်းနယ်ပယ်သို့ ဦးစွာပထမ စတင်ဝင်လာသူ လူပြိန်းလေးများဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဟက်ကာအား အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားနှစ်ခု ခွဲခြားနိုင်သည်။
* ၁။ ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေးအား ဝင်ရောက်စစ်ဆေးသူ၊ အကယ်၍ ထိုသူသည် နှောက်ယှက်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါက [[ခရက်ကာ]] (cracker) ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ဤ (cracker) အား Software များကို အပျော်သဘောဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဝါသနာအရ Reverse Engineering လုပ်ေသာသူများနှင့် မမှားသင့်ပါ။
* ၂။ နည်းပညာနှင့် ပရိုဂရမ်းမင်းနယ်ပယ်မှ ပေါက်ဖွားလာသူ
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/278187" မှ ရယူရန်